Bill Maher Isn’t the Only One Who Misunderstands Religion | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဟဲ့…ပေါ်ဦး….လက်ရှိ အကောင်းဆုံးကြွေးကြော်သံကဘာလဲ ပေါ်ဦး။ ။ အမျိုးဘာသာ သာသနာ ပါဘုရား မင်းကြီး။ ။ သူ့ချည်းသာလော ပေါ်ဦး။ ။ အဆဲအဆိုလေးနဲ့ပါဘုရား
ကုလားစုတ်နဲ့ ချင်းစုတ် – မြန်မာတွေရဲ့ “ethnic labeling or Racial Profiling and Ethnic Slurs” အကျင့် »
By REZA ASLANOCT. 8, 2014
This entry was posted on October 10, 2014 at 10:28 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.